Ungayitshintsha njani iphasiwedi oyingene ngegama lesitshixo | Ndisuka mac
Esi sifundo sincinci yinto enokuba luncedo kubo bonke abasebenzisi abasebenzisa iMac uqhubeka ubuza igama eligqithisiweyo lesitshixo. Kule meko, kulungile ukwazi olu khetho kwaye ke kuthintele ukuba uchwetheze njalo iphasiwedi.
Kwiimeko ezininzi, igama eligqithisiweyo leakhawunti yethu yomsebenzisi alinakufana naleyo yokungena kwi-keychain kwaye yiyo loo nto kufuneka siyibhale rhoqo. Kunye esi sifundo sincinci siza kufunda ukutshintsha iphasiwedi yesitshixo sokungena entsha.
Kufuneka wenze ntoni xa iMac yakho iqhubeka nokucela igama eligqithisiweyo lesitshixo
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuseta kwakhona ipassword yomsebenzisi we-macOS, kuba oku kungasicela ukuba sihlaziye igama eligqithisiweyo lesitshixo okanye ufake ipassword yesitshixo sakho sokungena. Kwimeko apho iMac yethu isixelela ukuba le nkqubo ayinakuvula isitshixo sakho sokungena, oko kuthetha ukuba isitshixo sakho sokungena kwi-imeyile siqhubeka nokusebenzisa iphasiwedi yakho yakudala. Ukuba awuyazi iphasiwedi endala Kuya kufuneka wenze i-keychain yokungena entsha kwaye siza kuyibona kwelinye inqaku.
Amanyathelo ekufuneka elandelwe ukuba siyalazi igama elidala eligqithisiweyo Zizo zilandelayo:
Vula usetyenziso lwee-keychains ezifumaneka kwifolda yabanye kwiLaunchpad
Kuluhlu lwee-keychains kwicala lasekhohlo lewindow, khetha u- "login"
Kwimenyu yokuHlela yemenyu yebar, khetha Guqula igama eligqithisiweyo lesitshixo "ngena" (Ifoto engezantsi)
Chukumisa chwetheza igama elidala lokugqitha kwiakhawunti yakho yomsebenzisi kumhlaba ongoku wegama eligqithisiweyo. Ligama lokugqitha ebesilisebenzisa ngaphambi kokusetha kwakhona
Ngenisa igama lokugqitha elitsha kwiakhawunti yakho yomsebenzisi kumhlaba omtsha wegama eligqithisiweyo. Eli ligama lokugqitha olisebenzisayo ngoku ukungena kwi-Mac yakho.Chwetheza igama elifanayo kwi-Qinisekisa, Yamkela umhlaba kwaye uphume kwi-Keychain Access
Ukulandela la manyathelo alula siyakutshintsha iphasiwedi emva koko kubalulekile ukumkhumbula, kunjalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Ungayitshintsha njani iphasiwedi oyingene ngegama
Andikwazi ukuyenza, iqhosha abalikhankanyileyo likhubazekile